सम्बन्धहरूको व्याख्या क्षमादान «
“अनि के विषयमा रहेछ नि उपन्यास ?” मैले गणेशप्रसाद लाठको नयाँ उपन्यास ‘क्षमादान’ पढिसकेको थाहा पाएपछि सीताले सोधिन् ।
पत्नी सीता सामान्यतया यसरी मैले पढेको किताबको औचित्यको खोजी गर्दिनथिन्, तर आजको उनको यस अप्रत्याशित प्रश्नले मस्तिष्क फनफनी घुमायो । कहिले चुपचाप सोफामा बसेर र कहिले कोठामा यताउता घुम्दै पढेको देखेर सोधेकी हुुनुपर्छ । सोचेँ, साँच्चै क्षमादान कुन विषयमाथि लेखिएको छ ? के एउटा उपन्यास कुनै खास विषयमाथि केन्द्रित हुनुपर्छ ? सिङ्गै जीवनको चित्रण हैन र उपन्यास ? समीक्षकका आँखाले यो उपन्यास पढेको थिइनँ, अलमल्ल परेँ । तर, मुखबाट फुत्त फुस्कियो, “जीवनका धेरै आयाम छन् यहाँ, तर यो खासमा स्त्री–पुरुषका सम्बन्धहरूको व्याख्या हो ।”
“स्त्री–पुरुषका सम्बन्धहरूको कस्तो व्याख्या रहेछ त ? स्त्री–पुरुषका सम्बन्धहरूका कति आयाम छन् नि उपन्यासमा ?” सीताको उत्सुकता अझ मुखरित भयो ।
“स्त्री–पुरुषका अन्तर्निभरता र अन्तर्विरोधको कथा छ यहाँ । स्त्री–पुरुष आपसमा कति स्वतन्त्र र कति पर–पर वा असम्बन्धित छन् भन्ने पनि कथाले देखाउँछ ।”
“किन पढ्नुप-यो यस्तो कथा तपाईंले ?”
“क्षमादान पति–पत्नीबीचको प्रेमको बेजोड कथा हो । हामी झट्ट हेर्दा वैवाहिक सम्बन्धमा स्त्रीको पुरुषप्रतिको निर्भरता देख्छौँ, स्त्रीले आफ्नो सम्पूर्ण सुरक्षाको आधार पुरुषलाई बनाएको देख्छौँ । यस एकाकी सोचलाई चिरेर उपन्यासले पुरुषको पत्नीनिर्भरता त्यसभन्दा धेरै गहिरो छ भनेर देखाएको छ । स्त्री–पुरुषबीच यौन एक सम्बन्ध–सेतु हो, तर यस उपन्यासमा आपसी यौन–निर्भरताभन्दा अरू आयामको चिरफार छ । मानिसका सम्बन्धहरूका आयाम कति व्यापक छन्, यो उपन्यास पढेपछि बुझ्न सजिलो पर्छ । ज्योत्स्नाको एकनिष्ठ प्रेमकथा पनि हो यो ।”
यसो भने पनि कथा सकिन लाग्दा ज्योत्स्नाको जीवनमा फणीन्द्र आइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । हो पनि, फणीन्द्रहरू नआइदिने हो भने जीवन रङहीन, रसहीन हुनेछ । जीवनमा सकारात्मकताको रङ घोलिदिन फणीन्द्र, गुरुमा, विनिथाहरू आउनैपर्छ, आउँछन् पनि ।
उता कुपात्र खलपात्र छ पुष्करन । जीवनभर अरूलाई गरेको अविश्वास र धोकाको परिणाम माने पनि नमाने पनि पुष्करन आफ्नै साझेदार पटवद्र्धनको षड्यन्त्रको सिकार भएर जेल पर्छ । धोका दिने उसको एकलौटी अधिकार समाप्त हुन्छ र ऊ आफ्नो जीवनमा गरेका कुकर्महरूको फल भोग्छ ।
“एए !” सीताले सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया जनाइन् । उनले फेरि सोधिन्, “प्रेममा क्षमाको कुरा कहाँ आउँछ ? प्रेम आफैँमा पूर्ण छैन र ?”
मैले भनेँ, “प्रेम ईश्वरीय हो वा इस्ट्रोजेन–प्रोजेस्टेरोन–टेस्टोस्टेरोनजस्ता रसायनको कुरा हो, जे भए पनि प्रेम पर्याप्त छ । जीवन प्रेममय भए पनि जसरी अबोधगम्य छ, प्रेम उसैगरी र उत्तिकै अबोधगम्य कुरा रहेछ । अनि जीवनमा क्षमा गर्न सक्नु अति कठिन कुरा रहेछ । आफूभन्दा निर्बल र सङ्कटमा फसेकालाई क्षमा गर्नु अझ कठिन कुरा रहेछ । प्रेममा मात्र यस्तो सम्भव हुने रहेछ ।” मेरो मनमा पुष्करन, सुरञ्जन, मृदुला, ज्योत्स्ना र सुलोचना घुमिरहे । पुष्करनकी ममताकी मूर्ति माता विनिथा, मृदुलाका पिता कुलभूषण पनि घुमिरहे ।
विनिथाको क्यान्सरविरुद्धको युद्ध, ज्योत्स्नाकी आमा सुलोचनाका अन्तद्र्वन्द्व, हजुरआमा वन्दनाका मानसिक उहापोहहरू बडो आश्चर्यलाग्दा छन् । लेखकले पात्रहरूलाई अनेक ठाउँमा घुमाएर पाठकलाई उतैउतै डो-याउनुभएको छ । चीन, भारत, अमेरिका र कहाँकहाँ । देशका अनेक गाउँमा पुग्छ पाठक । म पुगेँ । मैथिली, अङ्ग्रेजी, हिन्दीसमेत मजासँग सहजै प्रयोग गरिएको छ । यसले कथालाई अझ रोचक र यथार्थवादी बनाएको छ । रोम, ह्युस्टन, सिरहा, जनकपुर, डोडा मल्लुर, गोरखा, बेत्रावती र गोसाइँकुण्ड, धुलिखेल अस्पताल, कोडाइकनालको आयुर्वेदिक अस्पताल, काठमाडौँको जेल तथा उपन्यासमा वर्णित सबै स्थानहरू हाम्रो सोच–मनमै भएका विभिन्न स्थानहरू हुन् ।
सीता मेरो अनुहारमा आएका परिवर्तनहरू हेरिरहेकी थिइन् । मैले फेरि भनेँ, “मैले उपन्यासभरि आफूलाई खोजेँ, जहाँ पनि मैलाई भेटेँ । अंशमै सही, म पुष्करन हुँ, ज्योत्स्ना हुँ, मृदुला हुँ, फणीन्द्र हुँ, कमलनाथन हुँ, सुरञ्जन हुँ र वन्दना पनि हुँ । जीवनभर मैले तिमीमाथि थिचोमिचो गरेको छु सायद– अधिकार भन्ठानेर होला, कर्तव्य भन्ठानेर होला, तिमीभन्दा बलियो र ठूलो ठानेर होला । यी सबका लागि उपन्यासको चस्मा लगाएर मैले पछाडि फर्केर हेरेँ । तिमी वन्दना, गुरुमा, विनिथा, सुलोचना, ज्योत्स्ना, मृदुला सबै हौ । क्षमादान तिम्रो–मेरो कथा हो । अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपका सहरहरूमा भौँतारिइरहेका हाम्रा नानीहरूको कथा पनि हो ।”
२ सय ८१ पृष्ठमा फैलिएको उपन्यासले जीवनका जन्म–मृत्यु, हर्ष–शोक, विश्वास–धोका र सफलता–असफलताका सुन्दर र जीवन्त चित्रहरू उतारेको छ । समग्रमा स्वादिलो, पठनीय र सङ्ग्रहणीय छ, ‘क्षमादान’ । आज मैले जीवनदर्शनको लामो व्याख्या दिएँ सीताका लागि । खासमा ती सब म आफैँलाई भनिरहेको रहेछु । उता सीता अलमल्ल परेर मलाई हेरिरेकी थिइन्, यता मचाहिँ आफूले चिहाउन पाएको संसारबाट फर्केर नयाँ चेत, नयाँ ज्ञान र नयाँ जागरणले सन्तृप्त भएको थिएँ । जीवनमा क्षमा गर्न सकियो भने अथाह सुख हुने रहेछ । माधव घिमिरेको अमर काव्यकृति गौरीबाट एक हरफ पैँचो लिएर क्षमादानप्रतिको मेरो पाठकीय प्रतिक्रिया प्रकट गरूँ—
‘फेरि जीवन पाइँदैन, प्रियको सामु क्षमा माग हे ।’
विश्वव्यापी कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिमसँगै गुरुङ संस्कृतिमा आधारित घाटु नाच यसवर्ष पनि प्रभावित भएको